အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်လိင် - တိကျတဲ့အကြောင်းအရာ ဦး စားပေး (2009) - သင်၏ Brain On Porn
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2009 Jun;38(3):417-26. doi: 10.1007/s10508-008-9402-5.
Rupp HA1, ဝေါ်လဲန် K သည်.
စမ်းသပ်လေ့လာမှုများအရအမျိုးသားများသည်လိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုအမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုတုံ့ပြန်သည်ဟုယေဘုယျအားဖြင့်ထောက်ခံသော်လည်း၎င်းအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာသိသိသာသာကွဲပြားနိုင်သည်။ အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်သောဖြစ်နိုင်ခြေအရင်းအမြစ်တစ်ခုမှာအသုံးပြုသောလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၊ နှစ်သက်သောပုံများသည်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အခြေအနေများအပေါ်တွင် မူတည်၍ အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်တူညီသောစိတ် ၀ င်စားမှုမရှိနိုင်ပါ။ လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည်လှုံ့ဆော်မှုအချို့အတွက် ဦး စားပေးမှုရှိမရှိစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုဂ္ဂလဒိexplicit္အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ယောက်ျား ၁၅ ဦး နှင့်အမျိုးသမီး ၃၀ (၁၅ ဟော်မုန်းသန္ဓေတားခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်း) ၏အချိန်များကိုလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောဓာတ်ပုံများဖြင့်တိုင်းတာခဲ့သည်။ လိင်တူချင်းလိင်ဆက်ဆံသူများအနေဖြင့်ပုံဖော်ထားသည့်လိင်မှုကိစ္စ၊ အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ကိုအကြည့်နှင့်လိင်အင်္ဂါဒေသ၏အချိုးအစားကိုထိန်းချုပ်ထားသောရုပ်ပုံ ၂၁၆ ခုကိုကြည့်ရှုခဲ့သည်။ အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည်တူညီသောပုဂ္ဂလိကအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကြည့်ရှုချိန်များကဖော်ပြသောလှုံ့ဆော်မှုများအပေါ်သူတို့၏စိတ် ၀ င်စားမှုကွဲပြားမှုမရှိပါ။ သို့သော်တိကျသောရုပ်ပုံများအတွက် ဦး စားပေးမှုများရှိခဲ့သည်။ ပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဆန့်ကျင်သည့်လိင်ရှင်များ၏ဓါတ်ပုံများကိုပါ ၀ င်သူအားလုံးကအနည်းဆုံးလိင်ဆွဲဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများကအမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ကကင်မရာကိုသွယ်ဝိုက်ကြည့်ရှုနေသည့်ပုံများကိုပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဟုအမျိုးသားများကသတ်မှတ်သည်။ ပါ ၀ င်တက်ရောက်သူများသည်လိင်အင်္ဂါများ၏အနီးကပ်ဆောင်ရွက်ချက်များကိုကြာကြာမကြည့်ခဲ့ကြပါ။ ပါးစပ်ဖြင့်သန္ဓေတားဆေးသုံးစွဲသည့်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများကလိင်အင်္ဂါပုံများကိုလိင်ဆွဲဆောင်မှုနည်းသည်ဟုမှတ်ယူကြသည်။ အတူတူဤအချက်အလက်သည်လှုံ့ဆော်မှုကိုဖြတ်ပြီးခြုံငုံအကျိုးစီးပွားနှိုင်းယှဉ်လျှင်ပင်လှုံ့ဆော်မှုတိကျတဲ့အမျိုးအစားများအတွက်လိင် - တိကျတဲ့ ဦး စားပေးသရုပ်ပြပါ။